Ma dhab-baa in M/weyne Rayaale Xanuun dartii ula kulmi waayay Weftiga Ingiriiska? | Somaliland.Org
August 31, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin ayaa la sheegay in aanu shalay la kulmin Wefti ka socda Safaaradda Ingiriiska ee Itoobiya oo ballantu ahayd in uu la kulmo, ka dib markii sida Wararku ay sheegayaan uu ka cudur-daartay in uu xanuusanayo.
Warsaxaafadeed dorraad ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland, isla markaana uu ku saxeexnaa Afhayeenka Madaxtooyadu Siciid Caddaani Mooge oo la xidhiidhay kulan dorraad dhex maray Madaxweyne Rayaale iyo Wefti uu hoggaaminayo ku-xigeenka Safiirka Ingiriiska ee Addis-Ababa Mr. John Marshal, ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Rayaale iyo Weftigu ay kulmi doonaan shalay. “..Madaxweynaha JSL Mudane Daaahir Rayaale Kaahin iyo safiirka safaaradda Ingiriiska ee Addis Ababa Mr Marshall, waxa ay ku heshiiyeen in kulan dambe ay yeelan doonaan berrito (shalay) si ay u sii ambaqaadaan wada hadaladii maanta dhexmaray.” Ayaa lagu yidhi Warsaxaafadeedkaas. Hase ahaatee, Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in Madaxweyne Rayaale aanu la kulmin Weftigaa, isla markaana uu ku wargeliyay in uu buko. “Madaxweynaha ma garanayo inay wax jiraan, laakiin mar wuu la kulmay (Safiir-xigeenka Ingiriiska ee Itoobiya), mar labaadkii uu la kulmi lahaayeen saaka (shalay) wuxuu yidhi (M/weyne Rayaale) waan bukaa.” Ayuu yidhi Eng. Faysal Cali Waraabe, waxaanu sheegay in Weftigu ay arrintaa ka xumaadeen. “Balse Ilaahay baa og. Hase ahaatee, kollayba Weftigu may jeclaysan oo fajaciso ayay ku noqotay.” Ayuu intaa raaciyay Guddoomiyaha UCID.
Dhinaca kale, mar aanu xalay la xidhiidhnay Afhayeenka Madaxtooyada Siciid Caddaani Mooge, si aanu arrintan wax uga waydiino, ayaanay noo suurtogelin.
Geesta kale, siday sheegeen Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay, Madaxweyne Rayaale ayaa habeen hore kulan la yeeshay 11 Madax-dhaqameed ah oo ka mid Koox Salaadiin ah ooh ore ugu dhawaaqday inay dhexdhexaadin ka geli doonto khilaafaadyada Siyaasadeed ee dalka ka jira. Kulankaas oo ka dhacay Qasriga Madaxtooyada, ayaa la sheegay in Madaxweynaha aanay kulankaa ku wehelin xubno Xukuumaddiisa ka tirsani, isla markaana uu kali ku ahaa. Hase ahaatee, waxay Wararku intaa ku dareen in Madaxweyne Rayaale ku wargeliyay Madax-dhaqameedka in uu ka aqbalay dhexdhexaadinta ay wadaan, hase ahaatee uu u qabtay ballan kale, kaas oo Wararku tibaaxeen in uu u sheegay in kulankaa dambe ay xubno Xukuumaddiisa ka tirsani ku wehelin doonaan.